Jabaan 2018: Tirada dhimashada ayaa ka badan dhalashada! | Radio Himilo
Home / Arrimaha Bulshada / Jabaan 2018: Tirada dhimashada ayaa ka badan dhalashada!
Jabaan 2018: Tirada dhimashada ayaa ka badan dhalashada!
Posted by: Mahad Mohamed December 26, 2018
Himilo FM – Dalka Jabaan ayaa la kulmay hoos u dhac kii ugu ballaarnaa oo la xiriira tirada dadka dalkaasi sida ay tirakoobyada dowladda muujiyeen.
Waxaa kale oo uu dalkan wajahay hoos u dhac ku qotoma tirada dhalashada oo gaartay halkii ugu hooseysay. Waxaa la qiyaasay inay Jabaan ku dhasheen sanadkan 921 kun oo carruur ah iyadoo lagu tilmaamay heerkii ugu hooseeyay tan iyo markii la bilaabay diiwaan-gelinta dadka dalkaasi sanadkii 1899.
Tirada dhalashada cusub waxay 25 kun ka yartahay qiyaastii la sameeyay sanadkii 2017 sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka iyo shaqada.
Dadka ku dhashay Jabaan sanadkan dhammaadka ah ma aysan gaarin 1 milyan oo qofood, waxayna tani walaac xooggan ku abuurtay xukuumadda Tokiyo.
Tirada dadka ku dhintay Jabaan ayaa saro u kacday, waxaa la qiyaasay inay geeriyoodeen inka badan 1 milyan oo qofood.
Tirakoobyo ayaa muujiyay in 20% da’da dadka Jabaan inay ka weyn tahay 60 sanno jir iyadoo tirada shacabka dalkaasi tahay 124 milyan oo ruux hase haatee waxaa la filayaa in tirada hoos u dhacdo illaa 88 milyan marka la gaaro sanadka 2065.
Ra’iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe ayaa doonaya inuu ka hortago in tirada dadka dalkaasi hoos uga dhacdo 100 milyan, isaga oo taasi la dagaalamayana waxay xukuumadiisa qaadatay tallaabooyin lagu dhiira-gelinayo dhalmada iyo caafimaadka carruurta.
Previous: Matteo Darmian oo ka tagaya Man Utd bisha Janaayo
Next: Hindiya: 65 jir dhashay cunuggeeda labaad
About Mahad Mohamed
51-jir xanaaneysa 480 Bisadood
Covid-19 oo kusii fidaya Mareykanka
Dhiig bixintu waxay horseedi kartaa khatar